မော်ဒယ်တစ်ခုပေါ်တွင်ကူရှင်ချုပ်လုပ်နည်း - ရေမြှုပ်ဆေးကရိယာ - ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သော! •မော်ဒယ်လ်ကမ္ဘာ
စံပြကမ္ဘာ မော်ဒယ်လ်လမ်းညွှန်များ ရာသီဥတုမော်ဒယ်များ 2018-04-04 | 2
မော်ဒယ်ပေါ်ရှိဆေးသုတ်ခြစ်ခြင်းသည်အလွန်ထိရောက်သည်။ စစ်တပ်ယာဉ်များနှင့်လေယာဉ်ပျံများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးသူတို့ကိုခြေသည်းနှင့်လက်တွေ့ကျစေသည်။ အမှန်တကယ်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင်အထူးသဖြင့်စစ်တပ်သုံးစက်ကိရိယာများသည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုသောမည်သည့်စက်ကိရိယာမဆိုအ ၀ တ်အစားများနှင့်မျက်ရည်များကိုပြသပြီးအဆင့်တိုင်းနီးပါးတွင် dings၊ ဒါဟာမော်ဒယ်ပေါ်မှာဤထင်ဟပ်ထိုက်သည်။ ဒီစာသားထဲမှာ၊ မော်ဒယ်လ်တခုပေါ်ကိုကုတ်တံတစ်ချောင်းထက်ရေမြှုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ပြထားပါတယ်။ အဲဒါဟာအလွန်ရေပန်းစားပြီးရိုးရှင်းတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်တဲ့နည်းပဲ။
ကုတ်ခြစ်ခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းနည်းစနစ်များကို "chipping" ဟုလည်းမကြာခဏခေါ်လေ့ရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာရိုးရှင်းစွာဆေးသုတ်ထားသော brush ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ၎င်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ကူရှင်ချုပ်ခြင်းသည်ရေမြှုပ်ကောင်အသုံးပြုသကဲ့သို့သေးငယ်။ ကျပန်းမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအာရုံစိုက်ပါ။ ငါတို့လိုချင်တာတစ်ခုကနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရမယ်။ ငါ alledrogo ပါတဲ့ထုပ်ပိုးထားတဲ့အထည်ချုပ်ရေမြှုပ်ကိုငါကြိုက်တယ်။ ပန်းကန်ဆေးခြင်း (သို့) ရေချိုးခြင်းအတွက်ရေမြှုပ်ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော်မျက်လုံးကျယ်။ ကြမ်းတမ်းသောသူများအတွက်မဟုတ်ဘဲနူးညံ့ပျော့ပြောင်းသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ငါရှိရေမြှုပ်တစ်ဖဲ့ကိုနှစ်ပေါင်းကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။
ရေမြှုပ်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကူရှင်ချုပ်ပေးသည့်အတွက်ဆေးသုတ်ဆေး၏မှန်ကန်သောအရောင်ကိုလည်းလိုအပ်သည်။ သတိရသင့်သည်မှာသံမဏိသည်ရာသီဥတုအခြေအနေ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်လျင်မြန်စွာမှေးမှိန်သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တောက်ပသောအရောင်များကိုသတိပြုပါ - အညိုရောင်သည်ဤနေရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အရောင်အသွေးစုံလင်သောအရိပ်များနှင့်အရောင်ခြယ်ထားသောသုတ်ဆေးများ၏အရောင်များရှိသည်။ ငါကမစ္စတာကနေ mahagona အရောင်ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိတယ် ဝါသနာ။ သို့သော်သင်သည်“ လတ်ဆတ်သော” ကူရှင်ချုပ်လုပ်လိုပါကသံချပ်ကာအတွက်အသုံးပြုသောသံမဏိသည်အရောင်တင်ထားသောအနံများကဲ့သို့အရောင်တောက်ပခြင်းမရှိကြောင်းသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်မှောင်မိုက်။ ညစ်ပတ်သည့်သံမဏိအရောင်ကိုလည်းရွေးချယ်ရမည်။ လေယာဉ်ပြofနာလည်းရှိသည်။ အရေခွံကိုလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤနေရာတွင်ရွေးချယ်မှုမှာထင်ရှားသည်။ လူမီနီယမ်သည်သံချေး၊
ကျွန်ုပ်အတွက်ရွေးချယ်ရမည့်အရောင်မှာ Mig ၏ Ammo မှ acrylic သုတ်ဆေးဖြစ်သည်။ သင့်တွင်တစ်ခုမျှ မရှိ၍ ပိုမိုပေါ့ပါးသော matte browns များရှိပါက၎င်းကိုအနက်ရောင်နှင့်ရောစပ်နိုင်သည်၊
စင်ကြယ်သောစာရွက်သို့မဟုတ်စက္ကူသုတ်ပဝါပေါ်တွင်သုတ်လိမ်းပြီးသုတ်ဆေးများမဖွေဘဲအလွန်ကွဲပြားသောသဲလွန်စများစတင်ထွက်ခွာသည်။ ရေမြှုပ်ခြောက်သွေ့နေရမည် ဒီထက်ပိုတာကနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ကူရှင်ချုပ်ဖြစ်ခြင်း၊ \_ t
နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများဖြင့်ရေမြှုပ်၏အရောင်ကိုရွေးချယ်ထားသောနေရာများတွင်အထင်ကြီးစေပါ။ အဲဒါကိုဆီမဖြည့်ပါနဲ့၊ မဖိပါနဲ့၊
ဘယ်အချိန်မှာလေ့ကျင့်ခန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်။ ငါ့အတွက်တော့အမိန့်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်သည် - ပန်းချီ၊ စာရွက်စက္ကူ - wash - padding ။ တချို့ကအရင်က padding လျှောက်ထား washem ကျနော်တို့ယေဘုယျလုပ်ချင်လျှင်ဒါဟာသဘာဝကျပါတယ် washညစ်ပတ်မော်ဒယ်။ သို့သော်ကူရှင်ချုပ်စက်အား Matt Varnish ဖြင့်လုံခြုံစွာထားရှိရပါမည် wash'' ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ကူရှင်ချုပ်စက်ကိုဆေးကြောနိုင်တယ်။
ဘယ်မှာလဲ ဟုတ်ပါတယ်၊ အများကြီးကပေါ့ပေါ့တန်တန်သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်ဟောင်းနွမ်းနေသောပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တင်ပြလိုသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပထမ ဦး စွာဤအရာများသည်အနာများနှင့်ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများရရှိသောနေရာများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်္ဘောသားများသွားသည့်နေရာတွင်အမည်းများပေါ်လာလိမ့်မည်။ ရေမြှုပ်ကိုအမှတ်အသားဖြင့်မသုံးရန်အရေးကြီးသည်။ ကိတ်မုန့်တစ်လုံးချင်းစီထက်ကြာရှည်ပြီးရှည်သောပုံစံကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။
ရေမြှုပ်တစ်ခုနှင့်အတူမော်ဒယ်ပေါ်တွင်ကူရှင်ချုပ်လုပ်နည်း, တစ် ဦး ထက်ပိုသောအချိန်
ပထမ ဦး စွာမာဂျရစ်ပတ်ရစ်သည့်အဖုံးကဲ့သို့သောအခြားအရာတစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ပါ။ အညစ်အကြေးများမကျစေရန်၊ ဘောင်ခတ်ရန်ဖိအားများမည်သို့ချရမည်ကိုကြည့်ပါ။
ရေမြှုပ်ကိုညင်ညင်သာသာအသုံးပြုပါ၊ မကိုင်ပါနှင့်၊ မဆေးပါနှင့်၊ လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားမှုများအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အစက်အပြောက်ကူရှင်ချုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုရှောင်ရှားရန်၊ မော်ဒယ်လ်ပေါ်တွင်ကူရှင်ချုပ်ရန်၊ အပေါက်၊
အရင်ကဆိုရင်များအတွက် မော်ဒယ်လ်နည်းစနစ်များ ရာသီဥတု
ရှေ့သို့ ယခင် post: MiniArt BANTAM 40 BRC နှင့်အတူသင်္ဘောသား၊ ၁/၃၅ - ပြခန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဆွဲဆောင်မှုများ
နောက်တစ်ခု: နောက်တစ်ခု "စိုစွတ်သော palette" - acrylics နှင့်အတူပန်းချီနှင့်အတူကူညီပေးသည်
Anton Schneider သူကရေးသားခဲ့သည်:
Vielen Dank für den wissenswerten Beitrag über die Schwammtechnikpolsterung bei Modellen Ich bin auch Modellsammler und möchte bei meinen Gegenständen eine kleine Polsterung anfertigen lassen။ Ich hoffe, dass ich einen အရည်အချင်းရှိသော Polsterer finde, der das übernimmt, da ich nicht so begabt in dem Bereich bin. https://www.raum-wenselowski.de/muenster
Vielen Dank für den wissenswerten Beitrag über die Schwammtechnikpolsterung bei Modellen Ich bin auch Modellsammler und möchte bei meinen Gegenständen eine kleine Polsterung anfertigen lassen။ Ich hoffe, dass ich einen အရည်အချင်းရှိသော Polsterer finde, der das übernimmt, da ich nicht so begabt in dem Bereich bin.